Anguilla Fanavaozana Vaovao momba ny Fidirana Fidirana Fitetezana Manomboka ny 1 Novambra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Anguilla Fanavaozana Vaovao momba ny Fidirana Fidirana Fitetezana Manomboka ny 1 Novambra
Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovao
HE ny Governora sy ny Hon. Ny praiminisitra Anguilla dia nanoritra ny fepetra takiana amin'ny fidirana amin'ny mpitsidika izay hanan-kery ny alatsinainy 1 Novambra 2021.
Fepetra mialoha ny fahatongavana:
• Ny mpitsidika rehetra 18 taona no ho miakatra dia tsy maintsy atao vaksiny tanteraka vao mahazo miditra ao Anguilla; ny vehivavy bevohoka dia afaka amin'io fepetra io. Ny famaritana ny hoe "voa vaksiny tanteraka" dia telo (3) herinandro na iraika amby roapolo (21) andro aorian'ny fatran'ny vaksiny faharoa. Ny vaksiny mifangaro dia ekena fa tsy maintsy ho fiovaovan'ny Pfizer, AstraZeneca ary Moderna.
• Ny mpandeha dia tsy maintsy mangataka fahazoan-dàlana hiditra amin'ny ivisitanguilla.com; ny fangatahana fidirana dia ahitana ny saram-pitsapana fahatongavana $50 isaky ny olona.
• Mbola ilaina ny fitiliana Covid-19 miiba, saingy tsy maintsy atao 2-5 andro mialoha ny fahatongavany ny fitiliana.
• Ny karazana fitsapana azo ekena dia:
o Fitsapana fihetsehana rojo polymerase mivadika (RT-PCR).
o Fitsapana fampitomboana asidra nokleary (NAA).
o RNA na fitsapana molekiola.
o Fitsapana antigène vita tamin'ny alalan'ny swab nasopharyngeal.
• Tsy maintsy ekena ny laboratoara mikarakara ny fitiliana mialoha ny fahatongavana. Tsy azo ekena ny fitiliana ataon'ny tena sy ny antibody.
Amin'ny fepetra takiana:
• Ny vahiny rehetra dia voazaha toetra amin'ny fahatongavany ary tsy maintsy mijanona ao amin'ny hotely misy azy, villa manana fahazoan-dàlana na trano fanofana hafa mandritra ny fikarakarana ny fitsapana (matetika ao anatin'ny 24 ora).
• Raha ratsy ny valim-panadinana dia tsy misy fepetra takiana amin'ny confinement. Malalaka ny vahiny hitsidika ny nosy samirery.
• Ireo vahiny mijanona ao amin'ny nosy mandritra ny 8 andro mahery dia azo andrana amin'ny andro faha-4 amin'ny fitsidihany, tsy misy sarany fanampiny.
Ny fangatahana dia tsy ekena aorian'ny 12:00 PM EST ny andro mialoha ny andro hahatongavana.
Angatahina ny vahiny mba hanaraka sy hanaja ny protocole COVID-19 amin'ireo orinasa ao amin'ny nosy, izay ahitana ny fanaovana saron-tava eny amin'ny toerana malalaka; mitazona hatrany ny elanelana ara-tsosialy farafahakeliny 3 metatra eo anelanelan'ny olona ao anaty trano; ary ny fitandremana ny fahadiovana amin'ny fanasan-tànana matetika na ny fampiasana sanitizer tanana.
Ny manam-pahefana ara-pahasalamana ao Anguilla dia niantoka ny vaksiny Pfizer hanitarana ny programa vaksiny any amin'ny nosy amin'ny:
• Ny 12 ka hatramin'ny 17 taona rehetra.
• Ireo izay mbola tsy vita vaksiny.
• Tifitra fanamafisam-peo ho an'ireo izay efa vita vaksiny Astra Zeneca (eo ho eo amin'ny 60% amin'ny mponina eo an-toerana).